Alex Rhodes & NoFap - Your Brain On Porn နှင့်ပတ်သက်သော Nicole Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုထုတ်ဝေရန်အတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးရန် ScramNews မှမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှု
Alex Rhodes & NoFap အကြောင်း Nicole Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုထုတ်ဝေရန်အတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးရန် ScramNews မှမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှု
နှစ်ပေါင်းများစွာ, နီကိုးလ် Prause နှင့်သူမ၏မြောက်မြားစွာ alias ကိုရှိသည် အသရေပျက်အောင်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာ - လိုက်ရှာ ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတိပေးခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတင်းပို့သည့်သုတေသနပြုသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ။ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်နှစ်ခုမှာ Alex Rhodes နှင့် Nofap (ဖြစ်ရပ်များစွာကိုဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်) Nicole Prause၊ RealYBOP နှင့် David Ley တို့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း) ။ ၂၀၁၂ နှောင်းပိုင်းတွင် Prause ၏အသရေဖျက်မှုသည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး Rhodes သို့ ဦး တည်သွားခဲ့သည် အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု file Prause နှင့်သူမ၏ဆန့်ကျင် porn စက်မှုလုပ်ငန်းတွစ်တာအကောင့် @BrainOnPorn (အောက်တိုဘာ, 2019) ။
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု Rhodes နှင့် Nofap ကို Prause ၏ cyberstalking နှင့်အသရေဖျက်မှုကိုသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်မကြာခဏသူမ၏မှတဆင့် @BrainOnPorn အကောင့်။ Prause သည်နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းဆိုင်များကိုအီးမေးလ်ပို့ကာသူမကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည် ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Scram Media သည်“ မုသားကို ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီး Rhodes နှင့် Nofap” ကိုပစ်မှတ်ထားသောအသရေဖျက်မှုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။သူမကိုတရားစွဲဆိုရန်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအပြီးတွင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာသည်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံနေရသည်“ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ချီးမွမ်းပါ RealYBOP twitter) နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley ဒီအံ့သြဖွယ်အောင်မြင်မှုအကြောင်း
ယခုအခါ SCRAM ၏မီဒီယာသည်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ တောင်းပန်မှုကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အဲလက်စ်ရော့ဒ်အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးဆပ်ရန်ဖိအားပေးခံရပြီး၊ ကနေမကြည့် အမှတ်စဉ်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်.
Alex Rhodes ၏ဗြိတိန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Scram Media၊ Sam Bright နှင့် Kate Plummer တို့က Alex Rhodes အားတောင်းပန်ခဲ့သည်
အဆိုပါ Scram ဆောင်းပါး၌အသရေဖျက်မှုကိုရည်မှတ်အသေးစိတ်ကို
နီကိုလွင်က DonorBox ၏စီအီးအိုကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်ချားလ်စ် Zhang ကသူမ၏မုသားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်၊ နောက်ကွယ်မှအနှောင့်အယှက်ပေးမှုနောက်ကွယ်မှနှင့် BBB အားမသမာသောသတင်းပေးပို့မှုများအတွက်တရားစွဲဆိုမှုသေးငယ်စွာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးထွက် - သီးသန့်: BIG MONEY အသရေဖျက်မှုကိစ္စဆုံးရှုံးပြီးနောက် Leftie Scram ပိတ်သွားသည်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - NoFap LLC နှင့် Alexander Rhodes တို့သည် Scram News (၂၂.၅.၂၀.၂၀၁၀) မှသိသိသာသာအသရေဖျက်မှုနှင့်တောင်းပန်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။
Scram Media Limited နှင့်၎င်း၏ပံ့ပိုးသူ ၂ ဦး သည်တောင်းခံပြီး ScramNews.com ဆောင်းပါးကိုဖော်ပြပြီးနောက်အမေရိကန်အခြေစိုက် NoFap LLC နှင့်တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes အားအသရေဖျက်မှုအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်သူမကိုတရားစွဲဆိုရန်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအပြီးတွင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာသည်သေမင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံနေရသည်။ "
NoFap သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြန်လည်နာလန်ထူရေးပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်၊ ၎င်းသည်လစဉ်လစဉ် millions ည့်သည်သန်းပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိပြီး CNN၊ The New York Times, BBC, Business Insider, Time Magazine, MTV, The Washington Post နှင့် Showtime စသည့်ဆိုင်များတွင်အမျိုးမျိုးသောသတင်းများပါဝင်သည်။
Scram သတင်းဆောင်းပါးတွင် NoFap နှင့် Mr Rhodes နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသော၊ အထူးသဖြင့်ဆောင်းပါးသည် NoFap နှင့် Mr Rhodes (ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးအပါအ ၀ င်) အစွန်းရောက်များနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟုမှားယွင်းစွာအကြံပြုသည်။ တရား ၀ င်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ယူအက်စ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်လိုက်လျောညီထွေစွာနှင့်ပြင်းထန်သောအသရေဖျက်မှုပြောဆိုခြင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ခြင်း၊ ထိုတရားစွဲဆိုမှုတွင်တရားခံကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ ခြိမ်းခြောက်ရန်အစွန်းရောက်များကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်း၊ တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်တရားခံတစ် ဦး အားအနှောင့်အယှက်ပေးပြီး၎င်းတို့၏လိပ်စာကိုအွန်လိုင်းတွင်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကတရားရုံးမှရန်ပုံငွေရရှိရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Scram ကိုယခုရှာတွေ့နိုင်သည့်အပြည့်အဝပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်းနှင့်တောင်းပန်ခြင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဒီမှာ။ မစ္စတာရော့ဒ်စ်နှင့်လူနည်းစုရန်ပုံငွေရှာဖွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့၏အသရေဖျက်မှုပြောဆိုချက်နှင့် NoFap နှင့် Mr Rhodes တို့၏ဆောင်ရွက်မှုများသည်ဤစာအုပ်သည်လုံးဝမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအားအစွန်းရောက်အမုန်းတရားအဖွဲ့များအားနှောက်ယှက်ရန်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ရန်မစ္စတာရိုဒ်စ် (သို့) NoFap တို့ကလှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ တရားခံ။ မစ္စတာရော့ဒ်စ်၏အသရေဖျက်မှုပြောဆိုမှုသည်တရားခံများ၏သုတေသနနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ Mr Rhodes နှင့် NoFap အပေါ်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုအတွက်တရားဝင်တိုင်ကြားချက်တွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
Scram Media Limited သည် Mr Rhodes အားကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်သူ၏တရားဝင်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးရန်သဘောတူခဲ့သည်။ အလားတူမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များထုတ်ဝေရန်မဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကိုပေါ်ပေါက်စေသောအစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲ NoFap LLC သည်လောက၊ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ နောက်ခံအမျိုးမျိုး၊ ဘာသာရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်ချက်များ (သို့မဟုတ်မယုံကြည်မှု)၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်လက္ခဏာများ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးစုများ၊
အခြေချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Mr Rhodes က -
"ကျွန်တော်တို့၏ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် us ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသော၊ မှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောဒြပ်စင်များကကြိုးကိုင်ထားသောကြာရှည်ခံသည့် smear လှုပ်ရှားမှု၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခြင်း us ဘာသာရေးအုပ်စုများ၊ မုန်းတီးမှုအုပ်စုများနှင့်အစွန်းရောက်ဝါဒီများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည် us. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှလူများအားပေါင်းစပ်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအတူတကွကျော်လွှားနိုင်သည်။ ဤအချက်များသည်ပြissueနာကိုမှားယွင်းစွာအငြင်းပွားစေလိုပြီးလူတို့၏အမှန်တကယ်အမြင်များ၊ အဖြစ်မှန်များနှင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့မှလူများအားအာရုံလွဲသွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြနေသည်။ သူတို့အနေဖြင့်အသရေဖျက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးရေးလှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားပါမည်။ "
NoFap LLC နှင့် Alexander Rhodes တို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏တောင်းဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သည် Iain Wilson နှင့် is လိရှဗ Mason ဆို။
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှင့် NoFap LLC မှတောင်းပန်ပါတယ်
Scram Media၊ Sam Bright နှင့် Kate Plummer တို့ကဖော်ပြသည်
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ scramnews.com” ဆောင်းပါးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။သူမကိုတရားစွဲဆိုရန်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအပြီးတွင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာသည်သေမင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံနေရသည်။ဆောင်းပါးတွင် NoFap LLC ('NoFap') နှင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူအလက်ဇန်းဒါးရော့ဒ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသော၊ အထူးသဖြင့်ဆောင်းပါးသည် NoFap နှင့် Mr Rhodes (ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးအပါအ ၀ င်) အစွန်းရောက်များနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟုမှားယွင်းစွာအကြံပြုသည်။ တရား ၀ င်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်၎င်းတို့သည်အငြင်းပွားဖွယ်စကားများသော၊ ထိုတရားစွဲဆိုမှုတွင်တရားခံကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ ခြိမ်းခြောက်ရန်အစွန်းရောက်များကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည် (Dr. Nicole Prause)၊ လူစုလူဝေးရန်ပုံငွေရှာခြင်းအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လှည့်ဖြားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါးအတွင်းပါ ၀ င်သည့်စွပ်စွဲချက်များကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့် NoFap နှင့် Mr Rhodes တို့၏ထုတ်ဝေမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုအတွက်တောင်းပန်လိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေလိုက်သောအရာသည် NoFap နှင့် Mr Rhodes တို့၏လုပ်ငန်းနှင့်ဒေါက်တာ Prause အားဆန့်ကျင်သော Mr Rhodes မှတင်သွင်းခဲ့သောအသရေဖျက်မှုပြောဆိုမှုများနှင့်လုံး ၀ အထင်အမြင်လွဲမှားခြင်းနှင့်တိကျမှုမရှိသောကိုယ်စားပြုမှုတို့ဖြစ်ကြောင်း ၀ န်ခံအသိအမှတ်ပြုသည်။ Dr. Prause အားအနိုင်ကျင့်ရန်ခြိမ်းခြောက်ရန်အစွန်းရောက်အမုန်းတရားအဖွဲ့များပါဝင်သည်။
ဒေါက်တာ Prause အား Mr Rhodes ၏အသရေဖျက်မှုပြောဆိုခြင်းသည်သူမ၏သုတေသနနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ Mr Rhodes နှင့် NoFap အပေါ်အသရေဖျက်မှုကိုသာဆိုလိုသည်။ တရားစွဲဆိုမှု၏တရားဝင်မိတ္တူကို (ယူအက်စ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ထုတ်ပြန်သည်) ကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ။ ဒီတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလူနည်းစုရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။
NoFap သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမှလွတ်မြောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဝေဖန်သောအစပျိုးမှုများနှင့်မတူဘဲ Mr Rhodes ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်လောက၊ ၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ နောက်ခံအမျိုးမျိုး၊ ဘာသာရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်ချက်များ (သို့မဟုတ်မယုံကြည်မှု)၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်လက္ခဏာများ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးစုများ၊
Mr Rhodes, NoFap နဲ့စာဖတ်သူတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ NoFap နှင့် Mr Rhodes တို့အားဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တရား ၀ င်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၀ - အဲလက်စ်ရော့ဒ်၏“ Donor Box” ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗြိတိန်ဆောင်းပါးကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်လိုင်နှင့် RealYBOP တို့သည် RealYBOP နှင့် DonorBox တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (ထိုစဉ်က Rhodes ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသရေဖျက်မှုအားထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်သတိမထားမိ) ဖြင့်အမှန်တကယ်မတိကျသည့် hit-piece ကိုဖြန့်ရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
တရားဝင်အန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင် RealYBOP သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ SCRAM ဆောင်းပါးကိုပြန်လည် retweets
သူမအနေဖြင့်သူမသေဆုံးရမည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုခံယူခဲ့သည့်မှားယွင်းမှုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ထွက်ပေါက်ကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးခဲ့သည် Rhodes ၏ရန်ပုံငွေရှာခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ပျော်ရွှင်စရာ Prause သည်တွစ်တာများကိုစတင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဤအတုပြောဆိုမှုကိုမိနစ် ၂၀ ကြာခဲ့သည် ရှေ့မှာ ကင်ပိန်းကိုယ်တိုင်ကစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စတင်တင်ဆက်မှုသည်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီး Rhodes သည်အွန်လိုင်းကြေငြာခဲ့သောစတင်ခဲ့သောအချိန်အပေါ် အခြေခံ၍ သူမစိတ်မရှည်စွာခုန်ချခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် Prause မှာပထမ ဦး ဆုံးသေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုကိုပြောဆိုခဲ့သည် 7: 50 နံနက်, နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နောက်ထပ်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု (NoFap သည်၎င်း၏လူစုလူဝေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မစတင်မှီ)
NoFap နံနက် ၈ နာရီ ၁၂ မိနစ်တွင်၎င်း၏ crowdfund ကိုကြေညာခဲ့သည် (မိနစ် ၂၀ အကြာ)
Prause သည်သူမသေဆုံးမည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုမည်သည့်ဖန်သားပြင်တွင်မျှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ (သူမပါ အမှတ်စဉ်ထုတ်လုပ်သူ။)
SCRAM ဆောင်းပါးတွင် Prause မှအခြားပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၊ ဥပမာ - Rhodes ကသူမကို“ တရားစွဲတယ်” လို့ပြောပြီးသုတေသနပြုခြင်းသည်အသရေဖျက်မှုနှင့်ညီမျှသည်။ " ဒါစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် Rhodes သူမကိုတရားစွဲခဲ့သည် သူမကြောင့် သူနှင့် NoFap ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေသည်။ သူ၏တောင်းဆိုချက်တစ်ခုမျှသူမ၏သုတေသနကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည် များစွာသောရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ သူမကသူမ၏သုတေသန၏အရေးပါမှုကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ကောက်နှင့်သူမ၏တွေ့ရှိချက်သူမ၏ဘာသာရပ်များအကြားစွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပါပြီ။
သူမကပြောဆိုသည် Rhodes "misogyny" တွင်စေ့စပ် နှင့် Rhodes ၏ပရိသတ်များအားလုံးနှင့်အတူသူမ၏ Facebook နှင့်အီးမေးလ်ကို hack ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ ဘာအထောက်အပံ့မှမှမရှိ။ SCRAM ဆောင်းပါးတွင်သူမအနေဖြင့်သူမအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်ဟုယုံကြည်ပြီးသူမ၏ [အိမ်] လိပ်စာကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ထားကြောင်းယုံကြည်ခဲ့သည်။
သူမအနေဖြင့်မိမိ၏အိမ်လိပ်စာကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မည်သည့်အခါမျှတင်မည်မဟုတ်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့်သူမကအလေးအနက်ထားရန်အထူးခက်ခဲသည်။ Prause ကိုယ်တိုင်လိပ်စာအတုအယောင်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်သည်။ သူမကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာအတွက်သူမအသုံးပြုတဲ့လိပ်စာအပါအဝင် သူမကဒီ website အတွက် URL ကိုဖမ်းရန်တရားမဝင်အားထုတ်မှုအတွက်တင်သွင်း! ဤလိပ်စာများကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုသိမ်းဆည်းထားပါ၊ စာပေးစာယူများကိုမပို့နိုင်သည့်အရာအဖြစ်ပြန်ပို့ပါမည် (YBOP ၏ရှေ့နေကဲ့သို့) Prause ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်စာကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း).
SCRAM သည် Prause ၏ Rhodes ၏ဝတ်စုံကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Rhodes ၏ဇာတ်ကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် SCRAM သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအငြင်းပွားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Prause ကသူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မပတ်သက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် ပုံများနှင့်အခြားကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထား Prause အားတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် Rhodes ၏ Donor Box မှလှုံ့ဆော်မှုသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ တကယ်လား
စာနယ်ဇင်းသမားများသည် Prause ၏ / SCRAM ၏မမှန်မကန်နှင့်မှားယွင်းသောထင်မြင်ချက်များကိုမှန်ကန်သောအထောက်အထားများနှင့်ဆန့်ကျင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါသူတို့၏စာနယ်ဇင်းသမားများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအလွဲသုံးစားမှုများကြောင့် SCRAM အဖွဲ့သည်ဆောင်းပါး၏မှတ်ချက်များကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။
ယခုပယ်ဖျက်လိုက်သော SCRAM ဆောင်းပါးနှင့် RealYBOP ၏တွစ်တာတွင်မကြာမီတွင်အဲလက်စ်ရော့ဒ်ကသူ့အားတင်သွင်းခဲ့သည် နီကိုးလ် Prause အပေါ်တိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင်။ သူ၏တိုင်ကြားချက်အသစ်တွင် ScramNews ဆောင်းပါးကိုအသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
SCRAM ဆောင်းပါးသည်ရိုဒတ်စ်၏အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံအတွက်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြကွက် ၁၄ - Prause မှစွပ်စွဲထားသောအဖြစ်မှန် - တိကျမှန်ကန်မှုမရှိသော၊.
မတ်လ 3, 2020သူမရဲ့ RealYBOP တွစ်တာအကောင့်ကို Rhodes ရဲ့အသရေဖျက်မှုဝတ်ဆင်မှုမှာနာမည်ရနေပေမဲ့အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်ရဲ့ဓာတ်ပုံအောက်မှာ Scram ရဲ့အသရေဖျက်မှုကိုထိခိုက်စေမယ့်“ The Doctors”
၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၃ ရက်တွင်အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည် Prause အားပယ်ချရန်အဆိုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ တရားရုံးတင်မှု ၃ ခု၏ PDF ဖိုင်တွင် -
Rhodes ၏ဖိုင်အသစ်တွင် ScramNews ကိုတရားစွဲရန်ဗြိတိန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်စာရေးသူ ၂ ဦး အားအသရေဖျက်မှုအပါအ ၀ င် ScramNews hit-piece တွင် Prause ၏လက်အကြောင်းပိုမိုပါ ၀ င်သည်။
Nicole Prause သည် DonorBox ၏စီအီးအို (Charles Zhang) အားသူမ၏မုသားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အတွက်အသေးအဖွဲကိစ္စများအားတရားစွဲဆိုမှုအားခြိမ်းခြောက်နေသည်။ Rhodes ရဲ့ crowdfunding)
DonorBox ၏စီအီးအို Charles Zhang မှအောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Prause သည် DonorBox အားလိမ်လည်မှုများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများပါ ၀ င်သော numerator email များဖြင့်မဆုတ်မနစ်နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ သူမသည် BBB သို့အတုအယောင်အစီရင်ခံစာတင်ခဲ့သည်။ အားလုံးချယူရန်ပျက်ကွက်ကြိုးပမ်းမှု၌တည်၏ Rhodes ရဲ့ crowdfunding။ Zhang က Scram ၏တောင်းပန်မှုနှင့် Prause ၏နှောင့်ယှက်မှုနှင့်လှည့်စားမှုအကြောင်းတွစ်တာတွင်သူမကခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ကြံဖန်တီးမှုများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Charles Zhang သည် Scram မှထုတ်ဝေသောလိမ်လည်မှုများအားစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Zhang သည် Prause ကိုအမှတ်အသားပြုပြီးသူမ၏အတုအယောင်မကျေနပ်ချက်ကို Better Business Bureau သို့တင်ပြခဲ့သည်။
သူမ၏ BBB မှသူမ၏အီးမေးလ်။ သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းမုသားနှင့်ပြည့်ဝ၏။
ထို့နောက်ချီးမွမ်းမှုကို Zhang အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ သူကနောက်တစ်နေ့တွင်သူကတွစ်တာ:
Prause ၏အချည်းနှီးသောခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သူမလိမ်နေသော C&D စာ။
ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် Zhang သည် YBOP ကိုတံဆိပ်ကပ်သည့်သီးခြားချည်မျှင်တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။
Staci Sprout က Zhang သည်သူမဟုတ်ကြောင်းသိစေသည်